Akubona bonke abasebenzisi ngeso lengqondo indlela uhlelo kukhompyutha kwanoma iyiphi isikhundla. Kodwa bonke bazi kahle ukuthi yini ephakathi processing unit ukunikeza Computing futhi lonke uhlelo lwezempilo ufeza indima ebalulekile. Ngesikhathi abantu abambalwa esifanayo bayaqaphela ukuthi iqoqo imiyalelo ucacise ukulandelana processor imisebenzi. Indlela usebenza practice, manje futhi kuzoxoxwa.
Isethi imiyalo ezichaza ukulandelana izenzo wokugaya: kuba ngomqondo ovamile?
Njengoba yaziwa, central processing unit (CPU noma CPU) ohlelweni ikhompyutha inendima enkulu, ngoba ewunikwe yiSigungu zonke izinqubo ezihlobene nomsebenzi we-operating system nezinhlelo zokusebenza ezifakiwe.
Uhlelo lokusebenza uqobo, futhi noma iyiphi, esekelwe ukusebenza applets futhi izicelo. Singasho ukuthi isethi imiyalo ezichaza ukulandelana izenzo wokugaya, kukhona uhlelo, ukwenza isenzo esithile bebheke izibalo ekuqaleni inqubo elisebenzisekayo. Luyini uhlelo - enye indaba. Ingqikithi yale nqubo itholakala lokuthi ukuthi processor kunikezwe okubonisa ukusebenza umsebenzi othile.
Microprocessor ithimba: Ngabe isebenza kanjani?
Uma namanje abazi ukuthi isebenza kanjani, kufanele kuphawulwe ukuthi ekuqaleni ifayela elisebenzisekayo efanayo (ngokuvamile Exe-hlobo) isicelo egcinwe hard drive, samukelwa.
Ngokuvamile, iqembu mayunithi processor, iqondiswa ngqo yayo inkumbulo indawo noma oprerativku futhi emva kokwelashwa ngekhodi kanambambili kwenzekani ekwenzeni lokho okuhleliwe. Njengoba kusobala wokugaya akakwazi ukwamukela imiyalo efana "Gijima." okubizwa ngokuthi sokuhlanganiswa, okungukuthi ukuguquka imiyalo etholakala ikhodi yolimi kulo mshini inikezelwe yiluphi ulimi izinhlelo.
Kulokhu, kufanele kuphawulwe ukuthi iqoqo imiyalo ezichaza ukulandelana izenzo RAM noma CPU, ingaphansi imithetho eqinile lwezinhlelo - Iqiniso / Amanga ( «Weqiniso" / "Amanga"). Ayikho umhlabathi ophakathi, nakuba ekhelini algorithm imigomo ejwayelekile yomsebenzi ikhompyutha kuhilela isingeniso kanye nokusebenzisa "nezinye" opharetha (Else). Izimiso jikelele wenhlangano ikhompyutha yakho nje awakhele kuso.
Ngamanye amazwi, circuit selivela "Yebo-akukho-ezinye." Uma processor alivumelani isitatimende sokuqala, enqaba ukwenza, kulandela simiso sesibili, ukhetha isenzo salabo abaphila bhalisiwe e amafayela ehlelwe nemibandela ebekiwe esigabeni sesithathu, (hhayi ukhuluma ngabo nhlobo). A izingxenye ahlobene kungaba impela eningi.
Nokwenziwayo nemitapo ashukumisayo
Ukukhuluma ngalokho isethi imiyalo ezichaza ukulandelana izenzo RAM noma processor, awukwazi indiva umyalelo ukubulawa esekelwe izinto elisebenzisekayo futhi loadable ngaphezu.
Ezinye izinhlelo ethulwa ngesimo Exe elisebenzisekayo uhlobo lwefayela, COM, Bat, BIN, CMD, nabanye abaningi behluleka, ukuthumela inqubo siqu iziqondiso zalo ukubulawa ngqo CPU.
Okunye amafayela Uhlelo okudinga Ukulanda interface eyengeziwe noma izilungiselelo kungenzeka eminye ukulayishwa zibe RAM okuthiwa format ashukumisayo DLL imitapo, kanye namafayela wokumisa efana CFG noma XML.
Kulokhu, lo elisebenzisekayo Uhlelo imithwalo ngaphezu Ram ifayela ekhethekile, okuyinto ichaza ihlanganiswe elisebenzisekayo ikhodi uhlobo (isib, DLL-format), ngaphandle kulo abanakukwazi ukuhlanganyela emsebenzini.
Ukusebenzisa DLL-amafayela ngaphandle Exe
Nokho, kungaba imiyalo sekhompiyutha kusetshenzwe ngaphandle amafayela elisebenzisekayo. Vele ukubheka yokufaka, VST-plug-ins ngokuba ethandwa kakhulu Daw-studios (Digital Audio Workstation).
Kulokhu sikhuluma iqiniso lokuthi ungakwazi umane ukukopisha ifayela DLL indawo oyifunayo, setha search, futhi lolu hlelo luyoba ukucacisa synth entsha noma ukusebenza.
Ukwehluleka kanye amaphutha: kanjani ukubhekana nazo?
Izingxenye ezisemqoka computer njengoba processor, inkumbulo futhi idrayivu kanzima musa abangele ukungaqondi. Okungenani ngalesi Kunzima kakhulu ukukholelwa.
Kodwa nakhu inkinga ngezinye izikhathi ukusebenza uhlelo kungase kuhilele e yokuthi isethi imiyalo ezichaza ukulandelana izenzo wokugaya, CPU awufiki ngenxa yokwehluleka OS efakwe kwi computer. Lokhu kungenxa yokuthi esikhathini esithile kwenziwa inkonzo uzama akhiphe ikhodi ethile, kodwa uhlelo akusho azibonayo (imiyalo sekhompiyutha azanele).
Kukholakala ukuthi ikhambi elula kungenzeka ukuqalisa ngokushesha umyalo ngamalungelo umlawuli (CMD ku-console "Run" noma kwethulwa ifolda System32), okuyinto ebekiwe inhlanganisela SFC / scannow. Lo myalo ikuvumela ukuba ucacise izingxenye ezilimele noma engekho ohlelweni (mayelana umtapo ashukumisayo kwasekuqaleni).
Indlela yesibili, uma imiyalo sekhompiyutha kungukuthi liphathwa ngokufanele, - usebenzisa imiyalo isula ukuqalisa wemboni:
Bootrec.exe / fixmbr.
Bootrec.exe / RebuildBcd.
Qaphela ukuthi le miyalo ukusebenza njengoba ohlelweni wamanje (kwisicelo sabo kangcono ukusebenzisa kumodi ephephile Safe Mode), kanye ukucushwa ejwayelekile lapho ukulayisha indlela yokuthola kusuka kwimidiya yangaphandle ezifana-CD-ROM noma i-flash drive. Kulokhu, isethi imiyalelo ucacise izenzo ukulandelana processor, wenza yokutakula futhi kabusha we Loader. By the way, iqembu bengahlala njengoba bafunda kangcono lapho ubuyisela uhlelo.
Endabeni kakhulu, ungasebenzisa eziklanyelwe ithuluzi DLL Suite, inquma ulahlekile-Windows uhlelo yezincwadi, futhi ngemva ukuskena ukufaka ngokwakho. Ngokwengxenye enkulu, kokungenela komsebenzisi kuyehla kuphela yokuthi, ukulandela imiyalelo "Amakhosi". Nokho, ngaphandle uxhumano lwe-inthanethi liyadingeka ngoba thwebula zizokwenziwa kusukela lapho, hhayi kusukela ukusatshalaliswa yabo.
Ngakho, zama ukuba afingqe konke. Singasho ukuthi isethi imiyalo ezichaza ukulandelana izenzo wokugaya uhlelo ezivamile Ubhalwe ngolimi oluthile futhi komplirovannoy ikhodi eyamukeleke umshini. Imibuzo ukusebenza izinhlelo ngokwabo - enye indaba. Njengoba kusobala ekusebenziseni, bangakwazi njengesinikeziwe ngqo processor, ngokudlula inkumbulo, futhi ukusebenzisa izingxenye ezengeziwe. Kodwa futhi ithinta CPU kusebenta. Ngaphezu kwalokho, kusho ukuthi ifayela elandwayo amamojuli equkethe amakhodi elisebenzisekayo wenziwa inkumbulo, okuyinto kusetshenzwe yi-CPU, kanye processor is ukulayishwa. Kodwa kukhona akunakugwenywa, ngoba yonke isofthiwe wanamuhla yakhelwe lezi zimiso.
Indlela ukwakha disk ukuqalisa
Isiphequluli i-Android: izicelo Uhlolojikelele
Udweba kanjani indilinga "Photoshop". ukukhetha izinsimbi
Indlela ukusika isiqophi futhi kususe izingxenye engadingeki
Indlela ukususa izihloko wasezansi?
Indlela ukufaka uphawu euro kukhibhodi ngezindlela ezahlukene?
Izinguquko emthethweni ezikweletini. Umthetho "Ngo abaLawula (Ukuqothuka)"
Ukwehla kwe-Air ku-Irkutsk: kubangela, incazelo yemicimbi, ithinteke
Dikulja namafutha ngoba emalungeni: ukubuyekezwa, incazelo, ukwakheka, intengo
UValentin Rasputin: "Isikhathi sokugcina." Isifinyeto somsebenzi
Ukulola yokusaha ngezandla zabo: inqubo incazelo
Izithelo candied: ukuthi kuyini nokuthi ukupheka kubo?
Polypropylene Yesigcilikisha kanye polyethylene
Charles Luciano (Lucky Luciano, Charles Lucky Luciano), i gangster Italy: Biography
Uju ikhekhe nge ukhilimu omuncu
PC World: Yini imidlalo kuwufanele ukudlala?